Ama-cryptocurrensets njengendlela yezimali yokulwa nokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuxhasa yonke imisebenzi nokuhlela ngokumisa ukuguquka kwesimo sezulu kukhona uhlobo olukhethekile lwemali olusebenza njengemali yedijithali: Izimali zedijithali. Ngenxa yokwethulwa kwephrojekthi lapho iSpain ibambe iqhaza ebizwa ngeClimatecoin, abatshalizimali abavela kuwo wonke umhlaba banganikezwa ithuba lokubamba iqhaza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu ngokuxhaswa ngezimali ngale njongo.
Ufuna ukufunda kabanzi ngokuthi abatshalizimali bangazikhokhela kanjani izimali ukumisa ukuguquka kwesimo sezulu?
2 Ukuxhaswa ngezimali ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
3 Ukwanda kokuqwashiswa komphakathi
Lezi zimali zinobuchwepheshe obususelwa ku-blockchain futhi zenza wonke umuntu akwazi ukufaka isandla ekumiseni imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu. Kuyadingeka ukuthi izinkampani emhlabeni wonke zisungule ubuchwepheshe obusebenza kangcono ukunciphisa imithelela esiyibangela emvelweni nasekukhishweni komoya obamba ukushisa futhi, ngale ndlela, inkinga ingalungiswa esikalini somhlaba ngesikhathi sangempela.
Amabhizinisi ahlobene nokwenza umthwalo wemfanelo nokunakekela imvelo azokwazi ukuba nesiteji lapho angatshala khona imali emisebenzini nasemiklamo yokuxazulula isimo sezulu. Le ngxenyekazi ivumela ukuzibophezela okukhulu emvelweni futhi ibuye ikhombise izixazululo eziqondile, ezithembekile nezisobala.
Ukuxhaswa ngezimali ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
Ngale nyanga kaDisemba, kuzoba nemihlangano yokuqala lapho kuzonikezwa inani lokuqala kulezi zinhlamvu zemali ezibizwa nge- "climatecoin" ICOs. Izozama beka izigidi ezingama-255 zalezi zimali ukuze zitholakale ngokushintshana nge-ether, enye yezimali eziyinhloko kanye ne-bitcoin.
Izakhamizi, izikhungo, izimali zokutshala imali, izinkampani kanye nohulumeni bangabamba iqhaza futhi bazi ngalesi sigaba ukuthi, lapho sesiqedile, umsebenzi ophethe uhlelo uzokhetha amaphrojekthi ezemvelo angasiza futhi ahlinzeke ngezinguquko ezinkulu ku silwe nokuguquka kwesimo sezulu.
Amaphrojekthi okungenzeka ukuthi aphumelele imvamisa lawo asuselwa kuwo ukuhamba okusimeme (unikezwe ukukhishwa kwegesi enkulu yokushisa okuvela ezokuthutha), konke okuphathelene namandla avuselelekayo (ukuqondisa ikusasa lamandla maqondana noshintsho olwenziwe ngamakhethini), izindaba ezihlobene nogesi nezolimo, njll.
Izinkampani zokuqala ezikhetha ukuxhaswa zizinikele, ngaphezu kwakho konke, ekwakheni i-biofuel yezindiza, imbewu emelana kakhulu nezikhathi zesomiso inyuswe ukuguquka kwesimo sezulu nobunye ubuchwepheshe obusizayo ukugcinwa kwesikhutha emkhathini.
I-Climatecoin inikela ngamathuba okuthi izinkampani zingathengisa ngamalungelo okuthiwa yi-CO2 okukhishwa okusungulwe ku-Kyoto Protocol. Lokhu kunenhloso yokwenza intando yeningi ibe nokufinyelela esivumelwaneni neZizwe Ezihlangene ngokuthengisa kwabo.
Ukwanda kokuqwashiswa komphakathi
Lesi sinyathelo singadala ukwanda kokuqwashisa kwezenhlalo ngoba ababambiqhaza bangathola imbuyiselo yezomnotho evela kumholo wabantu abafinyelela ukuxoxisana ne-cryptocurrency, inkundla yayo ekwazi ukusabalalisa iphesenti lenzuzo etholakele.
Ngalolu hlelo, abantu bangakhuphula ulwazi lwabo ngemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu futhi benze okuncane ukuze bayimise. Kukhona okusha okungangezwa ukubhekana nale nkinga yomhlaba ethinta sonke.
Ngale phrojekthi asanda kubamba iqhaza kuyo i-UN Climate Summit (COP23) ebanjelwe eBonn, EJalimane, lapho kuchazwe khona ukuthi ukusetshenziswa kwe-blockchain kule ndawo kungenza kube lula ukubhekwa kwawo wonke amaphrojekthi aqalisa izinhlelo zikahulumeni okuhloswe ngazo ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Ukuhambisana kwezinkampani ngale miklamo kumenyezelwa yibo bonke.
Ekugcineni, kungashiwo ukuthi lobu buchwepheshe busiza ekwenziweni kokutshala imali kalula ezenzweni zemvelo ezisiza ukunqanda ukuguquguquka kwesimo sezulu nokuthi abantu bakwazi ukwenza umnikelo wabo omncane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ama-cryptocurrensets njengendlela yokuxhasa ngezimali ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu